Acidophilus (အက်စီဒိုဖီးလက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Acidophilus (အက်စီဒိုဖီးလက်စ်)
ရေးသားသူ Dr.Thant Zin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
Acidophilusဟာစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဘက်တီးရီးယား ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစာခြေစနစ်၊ ဆီးစွန့်စနစ်နဲ့ မျိုးပွားလုပ်ငန်းစနစ်တွေထဲမှာပုံမှန်နေထိုင်ပြီးဘာရောဂါမှ မဖြစ်စေတဲ့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီယား ဖြစ်ပါတယ်။ Lactobacillus ဆိုတာကလည်း အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ စားစရာတချို့ (ဥပမာ- ဒိန်ချဉ်) မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Lactobacillus ကို ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားရောဂါဖြစ်ခြင်းစတာတွေကိုကာကွယ်ကုသရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ ကိုလက်စထရောနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက်၊ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက်လည်းသုံးပါတယ်။
ဆေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုပြီးသိရအောင် သဘာဝဆေးဘက်ဝင် အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အောက်ပါလေ့လာချက်တချို့တော့ရှိပါတယ်။
ပုံမှန် ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီးအစာကိုခြေဖျက်ဖို့၊ အာဟာရတွေ ဗီတာမင်တွေ ပရိုတိန်းတွေကိုစုပ်ယူဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ Acidophilus ဟာ lactose လက်မခံနိုင်သူတွေရဲ့ အစာထဲက lactose ဓါတ်တွေကိုချေဖျက်ပေးပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ခရီးသွားစဉ် ဝမ်းလျှောခြင်းစတာတွေအတွက် ကုသနိုင်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝမ်းပျက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ကုသနိုင်ပြီး ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကျိုးမပြု ဘက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နင်းပေးပါတယ်။
နှင်းခူ၊ ဝက်ခြံနဲ့ မိန်းမကိုယ်ပိုးဝင်ခြင်းစတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဘက်တီးရီယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Lyme ရောဂါ၊ အင်ပျဉ်ထခြင်းတွေမှာကုသနိုင်ပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ တခြားဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားမှုကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
ကိုလက်စထရောကိုကျစေပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းကကိုလက်စထရောတွေကိုစားသုံးပစ်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ မျက်နှာပြင်အတွက် အသုံးချတာမို့ ကိုလက်စထရောဟာသွေးထဲကိုမရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။
acidophilus ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေလုပ်ဆောင်ချက် တခုကတော့ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ ပြန်ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တိကျတဲ့ အထောက်အထားတော့ မရှိသေးပါဘူး။
Lactose လက်မခံနိုင်သူများအနေနဲ့ Acidophilus ကိုအစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ Acidophilus ကိုရောဂါကာကွယ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံအတွက် သုံးမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ Candida မှိုစွဲတဲ့ ရောဂါဖြစ်ချိန်မှာ ပဋိဇီဝဆေးတွေ အားလုံးသောက်သုံးနိုင်တဲ့အပြင် Acidophilusကိုလည်း ၎င်းဆေးဝါးများ၊ အစာများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုမပြောင်းလဲဘဲ ဖြည့်စွက်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်အတွက် လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေဟာ ဆေးဝါးများလောက်တော့ မများပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေ ပိုမိုလိုအပ်ပါသေးတယ်။ သူ့ကိုသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် မသုံးခင်မှာအကျိုးကျေးဇူးကဆိုးကျိုးထက် ပိုများဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုပြီးသိရအောင် သဘာဝဆေးဘက်ဝင် အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများဟာ lactose မခံနိုင်သူများအတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ Acidophilus ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းများကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ နို့တိုက်ချိန်တွေမှာသုံးစွဲနိုင်ပြီး ၃နှစ်အထက် ကလေးကိုလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Acidophilusပါတဲ့ ဖြည့်စွက်စာကို အသက်၆လအရွယ်မှာပေးရင် တချို့ကလေးတွေမှာ နွားနို့နဲ့ ဓါတ်မတည့်နှုန်း မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားပြသနာ၊ Lactose လက်ခမံနိုင်ခြင်း
သွားညှိကိရိယာတပ်ထားခြင်း၊ အစာကြိတ်ဝါးခြင်း ပြသနာများ၊ သွားမညီခြင်း (Acidophilus ကြောင့် အခေါင်းပေါက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်)
Acidophilus ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဒီပစ္စည်းဟာအများစုနဲ့တည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် lactose မတည့်သူတွေမှာအစာအိမ်ပြသနာနဲ့ တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘက်တီးရီးယားကြောင့် မဟုတ်ဘဲထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ lactose ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားနည်းသောလူနာများတွင် ဆိုးရွားသောရောဂါပိုးကူးစက်မှု၊ သွေးထဲသို့ဘက်တီးရီးယားပိုးရောက်ခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရပုံမှာတဦးနဲ့ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ မပါဝင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိရင် အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍သင်သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိနေပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါရန်။
ဒီဆေးဟာသင့်ရဲ့လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအပေါ် ဓါတ်ပြုပြောင်းလဲခြင်းတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
အစာအိမ်ဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် acidophilus မသောက်မီ ၃၀-၆၀မိနစ် စောပြီးသောက်သင့်ပါတယ်။
ပဋိဇီဝဆေးများနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၂နာရီခြားပြီး သောက်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားနှိမ့်ချပေးတဲ့ ဆေးများ (cyclosporine၊ tacrolimus၊ azathioprine)၊ ကင်ဆာဆေးများနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါဘူး။
Warfarin နဲ့တွဲသောက်ရင် အာနိသင်ပိုပြင်းလို့ တွဲသောက်ရင် သတိထားပါ။
Acidophilusဟာ ကြက်သွန်ဖြူစုပ်ယူမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ၃နာရီခြားသောက်ပါ။
ယခုဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွက်စာသည်သင်၏လက်ရှိဆေးဝါးများနှင့် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိပါသည်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါရန်။
ယခုဖော်ပြထားသောအချက်များသည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များကို အစားထိုးရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ အသုံးမပြုခင်တွင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါရန်
Acidophilusအတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ထုတ်လုပ်ထားပုံအများစုရဲ့ အချိုးအစားဟာသက်ရှိအရည်အတွက်အပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသားတင်အလေးချိန်ကိုသာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက် CFU တယူနစ်ကနေ ၁၅ ယူနစ်အထိသောင်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိုသောက်ရင် အစာအိမ်ပြသနာဖြစ်နိုင်သလိုလျှော့သောက်ရင်လည်းမလုံလောက်ပါဘူး။
ကလေးများအတါက်ဆိုရင် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ အရင် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ acidophilus သုံးရင် အထူးသဖြင့် ၃နှစ်အောက်ဆိုရင် သတိထားရပါမယ်။
ဒီဆေးကိုသောက်သုံးဖို့ ပမာဏဟာတဦးနဲ့တဦးမတူနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ တခြားအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေက ထုတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာအမြဲတမ်းတော့ အန္တရာယ်မကင်းပါဘူး။ အပင်များအကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ (ဒါမှမဟုတ်) သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
acidophilus ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့်၊ ဆေးပြား၊ ဝါးစားနိုင်သော ဆေးပြားများ၊ ဆေးမှုန့်များ
နို့ထွက်ပစ္စည်းများ (acidophilus နို့၊ ဒိန်ချဉ်)
ပုံစံတမျိုးစီမှာသက်ရှိပေါင်း သန်း၅၀၀မှ ၁၀ဘီလျံထိ ပါဝင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 14, 2017
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO:
Mosby, 2001. Print version. Page 1.
Acidophilus (Lactobacillus acidophilus). http://www.drugs.com/mtm/lactobacillus-acidophilus.html. Assessed
July 18, 2016.
lactobacillus acidophilus. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/acidophilus/background/hrb-20058615. Assessed July 18, 2016.
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/790.html. Assessed July 18, 2016.
မျက်စိစွံတာနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးချင်နေမယ့် မေးခွန်းလေးတွေ
အဆုတ်ရောင်ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေ ကျန်းမာစေဖို့
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ
အစာအိမ်သမားတွေ နွားနို့သောက်တာ ကောင်းလား
ပိုးမွှားများတဲ့နေရာတွေကို နေ့စဉ်ထိတွေ့မိနေတာ သင်သတိထားမိရဲ့လား
မကြာခဏ ဝမ်းပျက်တတ်တဲ့ကလေးကို ဘာကျွေးရမလဲ
လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ခံတွင်းကျန်းမာရေး
သင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရတဲ့ ငုံဆေးသကြားလုံး